जेलभित्रै पैसा कमाउँछन कैदी | रुपान्तरण
जेलभित्रै पैसा कमाउँछन कैदी
भैरहवा । देशकै पुरानो मध्येको एक हो जिल्ला कारागार भैरहवा । वि.स. १९९० सालमा स्थापना भएको यो कारागारका कैदी बन्दीहरु बिभिन्न आयमूलक कार्यमा ब्यस्त रहेका छन् । कारागार प्रशासनले कैदीहरुलाई बिभिन्न ब्यवसायिक तालीम प्रदान गरेपछि कैदी जीवनयापन गरी रहेका उनीहरुलाई समयसंगै पैसा कमाउन पनि सहज भएको छ ।
जिल्ला कारागारका कैदीहरु अहिले मुढा, जुत्ता तथा थाकलका बिभिन्न सामाग्रीहरु निर्माण गरी रहेका छन् । बिहान ६ बजे उठेपछि प्राय कैदी बन्दीहरुको दिनचर्या यस्तै रचनात्मक काम गरेर वित्ने गर्छ । बिभिन्न अपराधमा सजाय पाएका तथा अदालती कारवाहीको क्रममा जेल परेका यी कैदीहरु सजाय भुक्तान मात्र नभई सुधारतर्फ समेत उन्मुख भएको पाइएको छ ।
यसअघि प्रायः कैदीहरु मुढा मात्र बनाउने गरेका थिए । बिभिन्न साईजका मुढा बनाएर मासिक सात हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेका थिए । अहिले भने कारागार प्रशासनले उनीहरुलाई जुत्ता तथा थाकलका बिभिन्न सामाग्रीहरु बनाउने तालीम पनि प्रदान गरेको छ । भैरहवा कारागारका कैदीहरु जुत्ता र थाकलका बिभिन्न सामाग्रीहरु बनाए पनि प्रर्याप्त बजार नपाउँदा भने केही निराश बनेका छन् । बनिसकेको जुत्ताहरु विक्री नहुँदा समस्या भएको कैदीका चौकीदार भोला सहानीले बताए ।
बजार मात्र हैन कारागारमा काम गर्ने प्रयाप्त ठाउँ नहुनु पनि कामदार कैदबन्दीहरुको लागि अर्को प्रमुख समस्या हो । क्षमता भन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी भएपछि कारागारमा काम गर्ने प्रयाप्त ठाउँ नै हुँदैन । १ सय ५० जना क्षमता रहेको भैरहवा कारागारमा अहिले बिभिन्न अपराधका ४ सय २९ जना कैदीबन्दीहरु रहेका छन् । क्षमता भन्दा बढी कैदी रहेको कारण काम गर्न मात्र हैन सामान्य हिंड्डुल गर्न तथा अन्य ब्यवस्थापनमा पनि समस्या आउने गरेको चौकीदार सहानीको भनाई छ ।
वि.सं. १९९० सालमा स्थापना भएको यो कारागार जिल्लाको एक मात्रै कारागार होे । यहाँ अहिले १ सय ४८ जना कैदी, विभिन्न अपराधमा मुद्दा चलेका तर अदालतबाट मुद्दा फैसला नभएका २ सय ८३ जना थुनुवा छन् । यी मध्ये लागूऔषध, डाकाचोरी, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा दोषी ठहरी कैद फैसला भएका चार जना विदेशी छन् । क्षमता भन्दा बढी कैदी राखिनु नेपालका सबै कारागारहरुको समस्या रहेको भैरहवा कारागारका जेलर नारायण पन्थीको भनाई छ ।